Izandiso zeeNkathazo zeNkathazo zaseBrazil zaseBrazil zeZizwe Soie Hair Atlanta Izandiso zeeNkathazo zeNkathazo zaseBrazil zaseBrazil zeZizwe Soie Hair Atlanta Soie Virgin Hair Extensions
Izandiso zeeNkathazo zeNkathazo zaseBrazil zaseBrazil zeZizwe Soie Hair Atlanta - Soie Virgin Hair Extensions
Eyaziwayo ngokuba nobuhle, i-sheen yemvelo, kunye nomgangatho ophezulu (10-A), yethu i-Brazilian virgin intendelezo yokwandisa izongezo izongezelela ukujonga kwimihlaba yabantu bonke. Ukuba unwele ongeyintombi le mijelo inemibala emibala. Intloko nganye yeenwele ngu-100% ubunwele bomntu kwaye iya kuhlala iminyaka ngokunyamekela nokunyamekela. Izinwele zethu zilahla ngokuphindwe kabini ukukhusela ukutyhala kunye nokusetyenziswa ngokufanelekileyo kwintengiso. Izandiso zeenwele ze-Clip-In ziyafumaneka.
isihluzo isihluzo izandiso zeenwele ezimhlophe iinwele zaseBrazil Iinwele ze-Deep Wave i-weft ephindwe kabini ukuvalwa kweenwele kwandiswa kweenwele